Sikukhombisa izinhlelo zokusebenza ezi-5 zokuhlanza idivayisi yakho ye-Android | Izindaba zamagajethi
Ungayihlanza kanjani idivayisi yakho ye-Android: inqolobane, umlando nokuningi
Sinezicelo ezimbalwa ze- ufeze umsebenzi wokuhlanza idivayisi yakho ye-Android, futhi angiqondile ukuthatha i-chamois nokupholisha isikrini, kepha maqondana nohlelo olusebenzayo namafayela alo, ngoba lapho sisisebenzisa kakhulu, kuzoba nenqolobane ethe xaxa futhi umlando wokuphequlula noma wokusesha unganwetshwa ngaphandle kwethu Siyabona. Kufanele ucabange ukuthi lapho siphambi komakhalekhukhwini noma ikhompyutha, ingalinganiswa kahle nemoto, edinga ukubhekwa ngezikhathi ezithile, nokuthi ukushintshwa kukawoyela kuvame ukuba ngumsebenzi ophoqelekile njalo ezinkulungwaneni ezimbalwa amakhilomitha.
Namuhla sikulethela izinhlelo ezinhlanu ezizokusiza ukuthi ube nefoni noma ithebhulethi yakho isesimweni esifanele, njengeCCleaner, App Cache Cleaner, Startup Manager, History Eraser and Disk Usage. Izinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezizokusiza kakhulu kuwe uma ubona ukuthi ifoni yakho ayisebenzi njengokujwayelekile futhi udinga i-cache ejulile noma ukuhlanzwa komlando.
2 I-App Cache Cleaner
3 Umphathi wokuqalisa
4 Isisuli Somlando
5 Ukusetshenziswa kwediski
Uhlelo oluhamba phambili impela kumakhompyutha wedeskithophu nokuthi muva nje sinawo ku-Android. Phakathi kwezici zayo ezihamba phambili sithola amandla we-batch ukukhipha izinhlelo zokusebenza, sula umlando wesiphequluli, i-cache yesicelo, umlando wekholi kanye nebhodi lokunamathisela.
Uzoba nezigaba ezintathu ezihluke kakhulu: umhlanzi, umphathi wohlelo lokusebenza nolwazi lohlelo. Mayelana nokuhlanza ukuphela kwakho, umhlanzi ubaluleke kakhulu. Ukuchofoza ukuhlaziya kuzokwazisa ngenani lememori ongalisusa. Khumbula ukuthi inqolobane yohlelo lokusebenza iqukethe imininingwane elandwe efonini yakho, ngakho-ke uma ususa i-Google Play Umculo uqobo, uzosusa amafayela omculo alandiwe.
para ukwazi ukufaka i-CCleaner, kufanele ulandele izinyathelo esizibonisayo kule ndatshana esikubhalile muva nje futhi sikukhombisa ukuthi ungayilanda kanjani.
I-App Cache Cleaner
Lolu hlelo lokusebenza lusebenza, njengoba igama lalo liphakamisa, uku sula inqolobane yohlelo lokusebenza onayo esigungwini sakho. Lokhu kuvumelekile ukuhlanza inkumbulo yangaphakathi onayo, futhi ngaleyo ndlela ukhulule isikhala, ngoba mzuzu lapho ufaka izinhlelo zokusebenza eziningi bese uqala ukuzisebenzisa, kuzofika isikhathi sokuthi uzophelelwa isikhala, ngakho-ke kuzobiza kakhulu .
Ngingaluleka bheka kahle ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ozozisusa isilondolozi ngaphambi kokwenza kanjalo, ikakhulukazi labo abafuna ukuba namafayela omculo noma amafayela alandwe kusitoreji sakho efwini. Kukhona umsebenzi wokususa yonke inqolobane yazo zonke izinhlelo zokusebenza kepha uqaphele. Ukukhipha kusuka kulesi sixhumanisi.
Lolu hlelo lokusebenza luzonakekela qapha konke okokufaka onakho ngemuva, futhi izokwenza kungasebenzi izinhlelo noma izinqubo ezingafuneki futhi ikunikeze ukusebenza kwezinhlelo zokusebenza ezethulwa nefoni lapho iqala phansi noma ivulwa.
Lapha kufanele unake ukungasebenzi izinhlelo ezifana newashi le-alamu noma okunye okubaluleke kakhulu njengesevisi ye-Google Playokunye kusuka ohlelweni. Izinhlelo ozilandile wazifaka ngesandla yizo okufanele uzenze zingasebenzi kwesinye isikhathi, ezinye zizishiye zinjalo. Ukuyilanda kusuka lapha.
Lolu hlelo lokusebenza isitayela ku-CCleaner, kodwa uzoba nakho konke okusondele, ekukhululeni isitoreji sangaphakathi, ukusula umlando wesiphequluli, umlando wekholi, isilondolozi sohlelo lokusebenza, umlando wokusesha we-Google, njll.
Isicelo sokuthi ibilokhu iku-Android isikhathi eside futhi kungenye yezinto ezinconyelwe ukuba ifoni yakho ilungele. Uhlelo lokusebenza lwamahhala kusuka ku- lesi sixhumanisi.
Lolu hlelo luzokusiza phatha isitoreji sangaphakathi sefoni noma ithebhulethi yakho, nokuthi izokukhombisa ngokubonakalayo ngendlela elula nokuthi ilusizo kakhulu. Ngokuthi shazi nje uzokwazi ukuthi unesikhala esingakanani kokuqukethwe kwe-multimedia njengomculo noma izithombe, noma isikhala esisetshenziswe uhlelo noma izinhlelo zokusebenza.
Isicelo esilula kodwa esinamandla okuyinto mahhala njengabo bonke abanye esikulethela namuhla kusuka eVinagre Asesino.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayihlanza kanjani idivayisi yakho ye-Android: inqolobane, umlando nokuningi
Ungawasusa kanjani ngokuphepha amafayela ku-Windows
Ikhaya Elimnandi: Unzalo Wokuhlala Okubi